Ardaydii ugu badnayd oo ku dhacday Imtixaanka Dowladda | KEYDMEDIA ONLINE
27 January 2021 Ciidamada Turkiga ee ka howl-gala xeebaha Soomaaliya oo waqtiga loo dheereeyay.
27 January 2021 Soomaaliya oo ku gacan seyrtay warbixntii guddiga xaqiiqo raadinta Jabuuti
Ardayd ku sugan degaanada Puntland ayaan sanadkii 2aad galin Imtixaanka Mideysan ee dowladda ay qaadayso, iyadoo maamulka Garowe ka jira lagu eedeeyay inuu siyaasadeynayo Waxbarashadda ubadka Soomaaliyeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday Maanta oo Axad ah Natiijada Imtixaanka Dugsiyada Sare ee dalka 2019-2020, kaasoo sanadkan ay ku dhaceen ardaydii ugu badnayd amid tan iyo markii la billaabay Imtixaanka mideysan dowladdii Xasan Sheekh.
Gobolka Banaadir ayay Wasaaraddu sheegtay in 7-kun oo ardey ay Imtixaanka ku dhaceen, taasoo ka dhigan in tirada ugu badan ardeyda dhacday ay yihiin kuwa gobolka Banaadir.
Tirada guud ee gashay Imtixaanka waxay gaareysaa 33,727, waxaa baastay 25,177. Ardayda ku dhacday guud ahaantooda waa 8,550 [Wiilal: 5,231 Gabdho: 3319 ]. Waxay Wasaaradda sidoo kale shaacisay 100-ka arday ee ugu dhibcaha badan Imtixaanka 2019-2020.
Waxyaabaha la yaabka leh ayaa ah in 4ta Iskuul ee ugu saraysa ay ku yaallaan gobolka Gedo oo Farmaajo kasoo jeedo, waxay kala yihiin 2 Garbahaarey 1 Luuq iyo 1 Baardheere.
0 Comments Topics: farmaajo imtixaanka shahaadiga waxbarashada